I-AASraw abaphakeli beepowder quality quality ... AASraw
Yenza umgangatho weprogram
I-AASraw ngokuyinhloko inikeza izinto eziqingqiweyo ze-anabolic steoids, izidakamizwa zokulahlekelwa kwesisindo, iziyobisi eziphuculisayo ngokwesondo, i-SARMS, i-PCT (unyango lwe-post cycle), i-hormone yabesifazane kunye namanye amayeza ahlobene. Ezi zinto ziquka iimpahla ezithandwa kakhulu kwiimarike, njenge-Anavar, i-Winstrol, i-Anadrol, i-dianabol, uchungechunge lwe-Testosterone, uchungechunge lweTrenbolone, uchungechunge lweBoldenone, uluhlu lwe-Nandrolone, i-Methenolone Series, iDonstanolone Series, i-Estradiol Series, i-Cialis, i-Viagra, i-Vardenafil, i-Anavafil, iFlibanserin , Sibutramine, Orlistat, Clomid, Halotestin, Femara, i-Tetolone Acétate, i-Ibutamoren, i-Testolone, i-Ligandrol, i-Cardarine, i-Ostarine, i-Clinbuterol, i-Modafinil, i-Pregabalin, i-Dymethazine, i- Yohimbine, njl.
Ngomgangatho we-AASraw, isiqu sethu se "Genius iimpahla singabonwa" sithetha oko. Kuba abanamava e-steroids bapheka okanye abanikazi be-labs abangaphantsi, ukusuka ekubonakaleni kunye novumba kunye nabanye abalinganiswa benyama, banokuxelela ukuba iimpahla ziyi-genius okanye ezimbi. Kodwa ekuncedeni izandla ezitsha, Zonke izinto ezibonakalayo ezivela ku-AASraw ziqinisekisiwe ukungahlambulukanga ngaphantsi kwe-98%, ezininzi iimpahla zihlambulukile 99%. Kukho iingxelo zokuhlola ze-HPLC kunye ne-COA njengenkxaso-siseko yesithembiso sethu. Kwaye, sikhuthaza abathengi bethu abathengi ukuba bavavanye i powder eluhlaza ngamatye abo basekhaya kunye nathi sinokuhlawula iindleko ezihambelana nazo.
Ekugqibeleni, i-AASraw icebisa abasebenzisi be-steroids ukuba bahlale bephilile ngokugqibezela okukhulu kwi-steroids. Bobabini ukusebenzisa i-underdosage okanye i-overdosage ayilungile. Ukufumana ezifanelekileyo, ukuphepha ingozi engadingekile.
Alissa on I-Trenbolone Acetate (i-Tren ace) ipowder
uThabitha on Oxandrolone (Anavar) powder
Uhlolo lwe-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)
Yonke Into Oyifunayo Ukuyazi Ngokwakheka Kwe-Dianabol Ukuthengiswa
Ukutshata on Cetilistat (Oblean) powder
uPatricia on Testosterone powder
I-RAD140 (Testolone) ipowder
ikaliwe 3.33 ngaphandle 5